Genesis 42 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yosef nuanom kɔɔ Egypt (1-4)
Yosef ne ne nuanom hyiae, na ɔsɔɔ wɔn hwɛe (5-25)
Ne nuanom san kɔɔ Yakob nkyɛn (26-38)
42 Bere a Yakob tee sɛ aduan* wɔ Egypt no,+ ɔka kyerɛɛ ne mma no sɛ: “Adɛn na motete hɔ na obiara rehwɛ ne yɔnko anim yi?” 2 Na ɔtoaa so sɛ: “Mate sɛ aduan wɔ Egypt. Monkɔ hɔ nkɔtɔ bi mmra sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtena ase, anyɛ saa a yebewuwu.”+ 3 Enti Yosef nuanom du+ siim kɔɔ Egypt sɛ wɔrekɔtɔ aduan. 4 Nanso Yosef nua Benyamin+ de, Yakob amma wankɔ bi, efisɛ ɔkae sɛ: “Anhwɛ a, na asiane bi akɔto no.”+ 5 Enti Israel mma no kɔɔ Egypt sɛ wɔrekɔtɔ aduan, na wɔne ebinom boom kɔe, efisɛ na ɔkɔm no adu Kaanan asaase so.+ 6 Ná Yosef ne asaase no so panyin.+ Ɔno na na ɔtɔn aduan ma asaase sofo nyinaa.+ Enti Yosef nuanom bae bɛkotow no de wɔn anim butubutuw fam.+ 7 Bere a Yosef ani bɔɔ ne nuanom so no, ntɛm ara na ohuu wɔn, nanso wamma wɔanhu onipa ko a ɔyɛ.+ Enti opoopoo n’ani kyerɛɛ wɔn bisaa wɔn sɛ: “Ɛhe na mufi?” Ɛnna wobuae sɛ: “Yefi Kaanan asaase so, na yɛrebɛtɔ aduan.”+ 8 Yosef huu ne nuanom, nanso wɔn de, wɔanhu no. 9 Ɛhɔ ara na Yosef kaee dae a ɔso faa wɔn ho no,+ na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moyɛ akwansrafo!* Moaba asaase yi so sɛ morebɛhwɛ baabi a mofa a, mubenya yɛn!”* 10 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me wura, ɛnte saa; mmom wo nkoa aba sɛ wɔrebɛtɔ aduan. 11 Yɛn nyinaa yɛ papa baako mma. Yɛnyɛ nnipabɔnefo. Wo nkoa nyɛ akwansrafo.” 12 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Moboa! Moaba asaase yi so sɛ morebɛhwɛ baabi a mofa a, mubenya yɛn!” 13 Ɛnna wɔkae sɛ: “Wo nkoa yɛ anuanom 12.+ Yɛyɛ papa baako mma,+ na ɔwɔ Kaanan asaase so; yɛn nua kumaa no wɔ yɛn papa nkyɛn,+ na nea ɔka ho no nni hɔ bio.”+ 14 Nanso Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛno ara na maka no, ‘Moyɛ akwansrafo!’ 15 Nea mede bɛsɔ mo ahwɛ ni: Farao te ase yi, moremfi ha nkɔ gye sɛ mo nua kumaa no aba ha.+ 16 Momma mo mu baako nkɔfa mo nua no mmra; mo a moaka no de, merennyaa mo. Ɛno na yɛde behu sɛ nea moreka no yɛ nokware anaa. Anyɛ saa a, ɛnde Farao te ase yi, yebebu mo akwansrafo.” 17 Ɛnna ɔde wɔn nyinaa guu afiase nnansa. 18 Ne nnansa so no, Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Misuro Onyankopɔn, enti mepɛ sɛ moyɛ eyi na moanya mo ti adidi mu. 19 Sɛ monyɛ nnipabɔnefo a, momma mo mu baako nka afiase ha, na mo a moaka no mfa aduan nkɔma mo fifo a wɔredi kɔm no.+ 20 Mokɔ a, momfa mo nua kumaa no mmɛkyerɛ me na minhu sɛ asɛm a moaka no yɛ nokware, na moanwu.” Na wɔyɛɛ no saa. 21 Afei wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Ampa ara, nea yɛde yɛɛ yɛn nua no ho asotwe na ɛreba yɛn so yi,+ efisɛ yehui sɛ ɔwɔ ahoyeraw mu,* nanso bere a ɔsrɛe sɛ yenhu no mmɔbɔ no yɛantie. Ɛno nti na yɛrehu amane yi.” 22 Ɛnna Ruben ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Manka ankyerɛ mo sɛ monnyɛ abofra no bɔne, ɛnna moantie?+ Ne mogya ho akontaa na afei yɛrebu yi.”+ 23 Nanso na wonnim sɛ Yosef te nea wɔreka no nyinaa, efisɛ sɛ wɔne no kasa a, obi na ɔkyerɛ ase ma no. 24 Ɛnna ofii wɔn nkyɛn kosui.+ Bere a ɔsan bae ne wɔn bɛkasae no, oyii Simeon fii wɔn mu+ na ɔkyekyeree no wɔ wɔn anim.+ 25 Afei Yosef kae sɛ n’asomfo no mfa aduan nhyɛ obiara kotoku ma, wɔmfa obiara sika nhyɛ ne kotoku mu, na wɔmma wɔn akwansoduan. Na wɔyɛɛ saa maa wɔn. 26 Enti wɔhyehyɛɛ aduan no wɔ wɔn mfurum so, na wofii hɔ kɔe. 27 Bere a woduu ahomegyebea a wɔn mu baako san ne kotoku sɛ ɔrema n’afurum aduan no, ohui sɛ ne sika no hyɛ ne kotoku mu. 28 Ɛnna ɔka kyerɛɛ ne nuanom sɛ: “Wɔde me sika asan ama me; monhwɛ sɛ ɛhyɛ me kotoku mu!” Afei wɔn koma tui, na wɔde ahopopo ka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Dɛn na Onyankopɔn ayɛ yɛn yi?” 29 Bere a wokoduu wɔn papa Yakob nkyɛn wɔ Kaanan asaase so no, wɔkaa nea ɛtoo wɔn nyinaa kyerɛɛ no sɛ: 30 “Ɔpanyin a ɔhwɛ asaase no so no poopoo n’ani kyerɛɛ yɛn,+ na ɔbɔɔ yɛn sobo sɛ yɛyɛ akwansrafo a yɛrebɛhwehwɛ asaase no so. 31 Nanso yɛka kyerɛɛ no sɛ, ‘Yɛnyɛ nnipabɔnefo, na yɛnyɛ akwansrafo.+ 32 Yɛkae sɛ yɛyɛ anuanom 12+ a yefi papa baako. Baako nni hɔ bio,+ na seesei, akumaa no wɔ yɛn papa nkyɛn wɔ Kaanan asaase so.’+ 33 Ɛnna ɔpanyin a ɔhwɛ asaase no so no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Nea ɛbɛma mahu sɛ monyɛ nnipabɔnefo no, munnyaw mo mu baako wɔ me nkyɛn,+ na mo a moaka no mfa biribi nkɔma mo fifo a wɔredi kɔm no.+ 34 Na momfa mo nua kumaa no mmɛkyerɛ me na minhu sɛ ampa monyɛ akwansrafo na mmom moyɛ nnipa pa. Afei mede mo nua no bɛsan ama mo, na mubetumi atɔ nea mopɛ biara wɔ asaase yi so.’” 35 Wohwiee wɔn kotoku mu nneɛma no, wɔnkɔhwɛ a, obiara sika bɔtɔ hyɛ ne kotoku mu. Bere a wɔne wɔn papa nyinaa huu sika no, wɔbɔɔ hu. 36 Na wɔn papa Yakob teɛɛm sɛ: “Moama ade atɔ m’ani!+ Yosef nni hɔ,+ Simeon nni hɔ,+ na morebɛfa Benyamin nso akɔ! Me so na eyi nyinaa aba!” 37 Afei Ruben ka kyerɛɛ ne papa sɛ: “Sɛ mansan amfa no ammrɛ wo a, wutumi kum me mma baanu.+ Fa no hyɛ me nsa, na mɛhwɛ de no abrɛ wo.”+ 38 Nanso ɔkae sɛ: “Meremma momfa me ba no nkɔ, efisɛ ne nua awu ama aka ne nkutoo.+ Sɛ asiane bi kɔto no kwan so a, mobɛma madi awerɛhow+ ara kosi sɛ mede me ti so dwen bɛkɔ Ɔdamoa* mu.”+
^ Ebetumi aba sɛ ɛyɛ hwiit anaa afifide bi a ɛte sɛ ɛmo.
^ Anaa “baabi a ahobammɔ nni.”
^ Anaa “ne kra wɔ ahoyeraw mu.”